Solar Energy အကြောင်း [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ > Solar Energy အကြောင်း
View Full Version : Solar Energy အကြောင်း
ဆိုလာစွမ်းအင်နဲ့ ပတ်သတ် တဲ့ ဗဟုသုတ လေးတွေ ကို ဒီ forum မှာ မျှဝေ စေချင်ပါတယ်၊ကျွန်တော် တို့ Soe Electronics မှ ဆိုလာ စွမ်းအင် ကို နယ် ရော မြို့ ပါမကျန် နေရာ ဒေသ မရွေး လိုက်လံ တပ်ဆင်ပေး ပြီး ကျွမ်း ကျင် အင်ဂျင်နီယာ များ နှင့် မိမိတို့့သုံးလို တဲ့ Load ပေါ် မူ တည်၍ တွက်ချက်ပေးပါသည်။ Lighting မှ အစ အိမ်သုံး၊ ရုံးသုံးအပြင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများပါမကျန် မိမိတို့ သုံးလိုသော power အပေါ် မူတည်၍ ဈေးနှုံး ချို သာစွာ ဖြင့် ၅နှစ်အာမခံ၊နှစ်၂၀အာမခံ ဖြင့်လိုက်လံတပ်ဆင်ပေးပါသည်။လိုအပ်ပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်၊
ဖုံး 09 49272418 , 09 73054948
forum ချစ်သူများ ပညာဗဟုသုတပြည့်ဝကြပါစေ၊
Product ကိုလည်းကြော်ငြာရင်း၊ အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံကိုပါ ရှင်းလင်းပြောပြစေချင်ပါတယ်။ ဒူဒူ့ လို လေ့လာခြင်သူတွေ အသိတိုးစေဖို့ပါ။ အင်တာနက်ကနေ ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ပေမယ့် ဘိုစာကို၊ မတတ်လေတော့ မြန်မာလို အားပါးတရဖတ်ခြင်လို့ပါ၊ ခင်ဗျား။
Solar Energy ဆိုသည်မှာ နေရောင်ခြည် မှစွမ်းအင်ကို ဆိုလာဆဲလ် များ မှ စုပ်ယူပြီး Storage (Battery Band) များတွင် သိုလှောင်ထားပြီး ၄င်းမှ တဆင့် AC, DC ပြန်လည်ထုတ်ယူ အသုံးပြုသော Renewable Energy
(ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ) စွမ်းအင် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သို့ပါ၍ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှူ နှင့် အသံဆူညံခြင်းကို အထူး သင့်လျှော်သော စွမ်းအင် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလာစွမ်းအင်ကို တကယ် အသုံးပြု မည်ဆိုလျှင် အသုံး မပြု မီ တက်သိနားလည်သော အင်ဂျင်နီယာ များ ဖြင့် တိုင်ပင် ပြီးမှ တပ်ဆင်အသုံးပြုလျှင်ပိုမို သင့်လျှော်၍ မိမိ တို့ သုံးလိုသော Wattage ပေါ်တွင် အမှန်တကယ် အာမခံ ချက် ရှိရှိအသုံးပြု နိုင် မည်ဟု အကြံပြု ချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုရင် ဆိုလာစွမ်းအင် ဟာ နေရောင်ခြည် ရဲ့စွမ်းအင်ကို ကျွန်တော်တို့ က လိုအပ် တဲ့ ပစည်း တွေ ကို Setup လုပ်ပြီး မိမ်ိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်သလောက်ထုတ်ယူအသုံးပြု ခြင်းဖြစ်သဖြင့် တခါ တရံ မှာ location ပေါ်မူတည်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ သင့်သော တွက်ချက်မှူ ရာသီဥတုပေါ်တွင်တည်မှီ သောကြောင့် အတွေ့ အကြုံ ရှိသော အင်ဂျင်နီယာ နီးစပ်ရာ Research လုပ်ထားသော ကုမဏီ များဖြင့်သာဆက်သွယ်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုသင့်လျှော်ပါသည်။ မိမိကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင်လည်း ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ယခုအခါတွင် တ ကမ္ဘာ လုံး ၌ ဆိုလာစွမ်းအင် ကို နိုင်ငံတော် စီမံကိန်း များချ မှတ်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်ရန်မဝေးသောကာလ တွင် မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ မြင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ နိုင်ငံတွင်လည်း နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ကို ကျေးလက်ဒေသမီးလင်း ရေး စီမံကိန်းများ က အစ နိုင်ငံတော် projects များအထိပါရေ ရှည် သုံးဆွဲ နိုင်ရန် စိတ်ဝင်စားလျှက်ရှိပါတယ်။ သို့ပါ၍ ကျွန်တော်တို့ ASIA SOLAR CO.,LTD အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ မည်သည့်အရပ်ဒေသမဆို အသုံးပြုလိုသော Load ပေါ်မူတည်၍ servery ဆင်းခြင်း၊ တိုင်းတာတွက်ချက်ပေး ခြင်းများကို တပြေးညီဆောင်ရွက်ပေးလျှက်၇ှိပါတယ်။လိုအပ်ချက်များရှိလျှင် ဖုံး 01 8551124 နှင့် hp 09 49272418 သို့ အချိန်မရွေးဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဖိုရမ်ချစ်သူများ ပညာဗဟုသုတ တိုးပွားနိုင်ပါစေ။
သို့ပါ၍ ကျွန်တော်တို့ ASIA SOLAR CO.,LTD အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ မည်သည့်အရပ်ဒေသမဆို အသုံးပြုလိုသော Load ပေါ်မူတည်၍ servery ဆင်းခြင်း၊ တိုင်းတာတွက်ချက်ပေး ခြင်းများကို တပြေးညီဆောင်ရွက်ပေးလျှက်၇ှိပါတယ်။လိုအပ်ချက်များရှိလျှင် ဖုံး 01 8551124 နှင့် hp 09 49272418 သို့ အချိန်မရွေးဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Watt 2000 လောက် နေ့ရောညပါ သုံးနိုင်ဖို့ဆိုရင် လိုအပ်မယ့် Setup တန်ဖိုးက ဘယ်လောက်လောက် ရှိသွားမလဲခင်ဗျ..။ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းမှာသုံးချင်တာပါခင်ဗျ။
ဆိုလာစွမ်းအင်ကို တကယ် အသုံးပြု မည်ဆိုလျှင် အသုံး မပြု မီ တက်သိနားလည်သော အင်ဂျင်နီယာ များ ဖြင့် တိုင်ပင် ပြီးမှ တပ်ဆင်အသုံးပြုလျှင်ပိုမို သင့်လျှော်၍ မိမိ တို့ သုံးလိုသော Wattage ပေါ်တွင် အမှန်တကယ် အာမခံ ချက် ရှိရှိအသုံးပြု နိုင် မည်ဟု အကြံပြု ချင်ပါတယ်။
ဆိုလာစွမ်းအင်ကို အပူစွမ်းအင်အဖြစ်ရယူအသုံးချခြင်းနဲ့ ဒီစီ လျှပ်စစ်ပင်ရင်းတစ်ခု အဖြစ် အသုံးချခြင်း စတဲ့ နည်းလမ်းကွဲတွေ ရှိတယ်လို့ အေ၇ာတို့MEF မောင်နှမတွေ သိနားလည်ထားပါတယ်။
ASIA SOLAR အနေနဲ့ နေရောင်ခြည်မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရယူအသုံးပြုခြင်းစနစ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုအချို့ကို ရောင်းချလိုတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
အရင်ကအနေအထားမှာတော့ အရောင်းတာဝန်ခံအချို့ဟာ နည်းပညာ ဘွဲ့ ဒီဂရီ ရရှိပြီးသူဖြစ်နေသည့်တိုင် ရောင်းကုန်ပစ္စည်းရဲ့ အချက်အလက်များကိုပင် ၀ယ်ယူအသုံးပြုလိုသူ သိချင်သလောက် ဂဃနဏ မဖြေကြားနိုင်ကြတာတွေ့ရဖူးပါတယ်။
ဒီလိုဖြင့် တတ်သိနားလည်သော အင်ဂျင်နီယာများဖြင့်တိုင်ပင် ဆိုတဲ့အချက်က အလွန်အရေးပါနေလို့လားဟု မေးစရာဖြစ်နေပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးချလိုသူ အများစုအတွက်တော့ အင်ဂျင်နီယာရဲ့ အကြံပေးချက်ဘာညာ ဆိုတာတွေ မလိုအပ်ဖူးလို့ အေ၇ာမြင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်ဒီလို သုံးသပ်တာလဲ၊ သိချင်တာတွေက ဘာလဲ ဆိုတဲ့ အမြင်ကို ဆက်ရေးပါမယ်ရှင်။
ဘာလို့လဲ ဆိုရင် ဆိုလာစွမ်းအင် ဟာ နေရောင်ခြည် ရဲ့စွမ်းအင်ကို ကျွန်တော်တို့ က လိုအပ် တဲ့ ပစည်း တွေ ကို Setup လုပ်ပြီး မိမ်ိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်သလောက်ထုတ်ယူအသုံးပြု ခြင်းဖြစ်သဖြင့် တခါ တရံ မှာ location ပေါ်မူတည်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ သင့်သော တွက်ချက်မှူ ရာသီဥတုပေါ်တွင်တည်မှီ သောကြောင့် အတွေ့ အကြုံ ရှိသော အင်ဂျင်နီယာ နီးစပ်ရာ Research လုပ်ထားသော ကုမဏီ များဖြင့်သာဆက်သွယ်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုသင့်လျှော်ပါသည်။ မိမိကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင်လည်း ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ဆိုလာပြားအသုံးပြုပြီး အလင်းစွမ်းအင်မှ ဒီစီ လျှပ်စစ်ဓါတ် စွမ်းအင်ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း သိရှိစိတ်ဝင်စားသူများ ရှိကြပါတယ်။
နေရာဒေသ မတူလျှင် တနေ့တာ အလင်းရောင်ရရှိမှု ကွာခြားနိုင်တာကြောင့် အကျိုးဆက်ကွာခြားမှာ သိနားလည်နိုင်ကြပါတယ်။
ဆိုလာပြားကို နေရာချထားပုံ မတူလျှင်တောင် အလင်းရရှိမှု ကွာခြားနိုင်တာကြောင့် ပုံသေတည်ငြိမ်စွာ တပ်ဆင်ထားသလား၊ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပိုကောင်းအောင် တည်နေပုံပြောင်းရွှေ့ပေးနိုင်သလား စတဲ့အချက် ဆိုလာပြားမျက်နှာပြင်မှာ အလင်းကောင်းစွာ ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်မှုကို နှောက်ယှက်ဟန့်တားတဲ့ ဖုန်မှုန်ကပ်ငြိမှု၊ ၀န်းကျင်အဆောက်အဦးများရဲ့ အရိပ်ထိုးမှုတွေ သက်ရောက်မှုရှိမှာကိုလည်း သဘောပေါက်နိုင်ကြပါတယ်။
တနေရာမှ တစ်ခုတည်းသော ဆိုလာပြားအတွက်ပင် နွေမိုးဆောင်း ရာသီဥတု ကွာခြားလျှင် ကွာသလို အလင်းစွမ်းအင်ရယူနိုင်မှုကွာခြားတာကြောင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်ယူစုဆောင်းနိုင်မှုကွာမှာတွေကို အခြေခံလောက်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် နေရာဒေသ စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် သုတေသနပြုလုပ်ထားချက်တွေကို အသုံးမ၀င်ဘူးလို့ မဆိုလိုပေမယ့် စွမ်းအင်အနည်းငယ်လောက်ပဲ ရယူ အသုံးပြုလိုသူတွေအတွက် အရေးမပါလှတာတော့ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၀ယ်ယူစမ်းသပ်အသုံးပြုလိုသူများ စိတ်ပါဝင်စားသိရှိလိုတာက ငွေအရင်းအနှီးမည်မျှသုံးစွဲနိုင်လျှင် မည်သည့် လျှပ်စစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတို့ကို မည်မျှကြာကြာ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဆက်တိုက် သုံးစွဲနိုင်မှာလဲ ဆိုတာမျိုး အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းပေးတာမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု ရလဒ်နှင့် လက်တွေ့ကြုံတွေ့ရမှု ကွာခြားလွဲမှားစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအချက်တွေ အများကြီးရှိနိုင်တာ သဘောပေါက်သိမြင်သူများက တိကျတဲ့ တွက်ချက်အကြံပေးမှုကို မတောင်းဆိုသလို အာမခံချက် စတာတွေအပေါ်လဲ ယုံကြည်အားထားမှာလည်း မဟုတ်ဘူးလို့မြင်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ အေ၇ာ အရေးကြီးတယ်လို့ မြင်တဲ့အချက်က တဖြည်းဖြည်းခြင်း စုဆောင်းရလာနေမည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်တဲ့အပိုင်းနှင့် မည်သည့်စွမ်းအင်စနစ် အမျိုးအစားအသွင်ဖြင့် ပြန်လည်အသုံးချမှာလဲ ဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် ဆိုလာပြားမှ စုဆောင်းပေးတဲ့ ဒီစီလျှပ်စစ်ဓါတ်ကို ဘက်ထရီများမှာ သိုလှောင်ကြရမှာ သုံးစွဲမည့် ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်နှင့် လျှပ်စီး ပမာဏအပေါ် မူတည်ပြီး ရင်းနှီးငွေနှင့် ပြုပြင်စားရိတ် အလွန်ကွာခြားနိုင်ပါသည်။
သိုလှောင်ထားသည့် လျှပ်စစ်အမျိုးအစားမှ မိမိအသုံးပြုလိုသည့် လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများနှင့် သင့်လျော်ကိုက်ညီသော စနစ်ကို ပြန်လည်ပြောင်းလဲ ထုတ်ယူရန်မှာလည်း ဈေနှုန်းကွာခြားချက်မှာ တွက်ချက်ခန့်မှန်းရန်မလွယ်ကူသော အချိုးမျိုးဖြင့် ပြောင်းလဲနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
အေစီ၂၃၀ဗို့အားစနစ်သုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ စုစုပေါင်း ၆၀၀ ၀ပ်အထိ တစ်ည ၃နာရီဆက်တိုက် သုံးစွဲလိုသူတစ်ဦးထက်
အေစီ၂၃၀ဗို့အားစနစ်သုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ စုစုပေါင်း ၁၈၀၀ ၀ပ်အထိ တစ်ည ၃နာရီဆက်တိုက် သုံးစွဲလိုသူတစ်ဦးက ရင်းနှီးမတည်ရသောငွေ ၃ဆ တိတိ ကုန်ကျမည်ဟု မပြောနိုင်သလို ပိုသက်သာမည်ဟုလည်းမဆိုနိုင်ယုံမျှမက အကုန်အကျ ပိုများနေခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ယေဘူယအားဖြင့် ဤအဆိုသည် ယုံကြည်ရန်ခက်ခဲမည်မှန်သော်လည်း အသုံးပြုမည့် ၀န်တို့ကို သီးခြားခွဲပြီးသုံးစွဲရန်မဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေစသည်တို့အတွက် မှန်နေပါသည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ မှန်းမျှော်မထားသော အကြောင်းအချက်များစွာတို့ကြောင့် ဓါတ်အားတစ်ယူနစ်သုံးနိုင်ရန်အတွက် ကုန်ကျမည့်မတည်ရင်းနှီးငွေ၊ ပုံမှန်သုံးစွဲသွားနိုင်အောင် ပြုပြင်ထိန်းသိန်းလဲလှယ်စရိတ် စသည်တို့တွက်ယူတည်ပြုရန်ခက်ခဲကြောင်းသာဖြစ်ပါသည်။
ခက်ခဲသည်ကို သိရှိလက်ခံပါက အသုံးချပုံ ခပ်ဆင်ဆင်တူသည့် အခြေအနေများအတွက်၊ စွမ်းအင် ဘယ်လောက်မှ ဘယ်လောက်အထိ ဟု အတန်းအစားများခွဲခြားပြီး
၁) ရင်းနှီးရမည့် ဆိုလာပြားဖိုး ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ၊
၂) သိုလှောင်မှုအတွက် ဘက်ထရီအိုးဖိုးခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ
၃) ထိန်းညှိအားသွင်းရန်နှင့် စွမ်းအင် ပြောင်းလဲသုံးစွဲနိုင်ရန် အထိန်းကိရိယာတို့အတွက်ကုန်ကျမည့်ငွေ
၄) တပ်ဆင်နေရာချထားမှုနှင့် တစ်နှစ်လျှင် ခန့်မှန်းကုန်ကျမည့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်
စသည်တို့ မှန်းဆ တင်ပြပေးနိုင်လျှင် စိတ်ပါဝင်စားသူတို့အတွက် အကျိုးရှိနိုင်ပါသည်။
၀ပ်၂၀၀၀ လောက် နေ့ရောညပါသုံးနိုင်ဖို့ ဆိုတာ မြန်မာပြည်အတိုင်းအတာနဲ့ ဓါတ်အားအတော်သုံးတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်အားစနစ်က မီးအားမကျပဲ ၂၄၀ ဗို့အမြဲရှိတယ်ထားပါဦး ၀ပ်၂၀၀၀ ရဖို့ ၈ အမ်ပီယာကျော် လိုအပ်ပါတယ်။
အေ၇ာကြားဖူးတာတော့ မြန်မာ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလုပ်ငန်းက နေအိမ်များကို ဧကသွင် စနစ် Single Phase နှင့်ဖြန့်ချိတာများပါတယ်တဲ့။ ဒီတော့ ပါဝါဖက်တာ ကို ၀.၈ လောက်ထားတွက်လျှင် ၀ပ်၂၀၀၀ ရဖို့ ဗို့ x အမ်ပီယာ က ၂၀၀၀ ကျော်မှာကြောင့် လျှပ်စီး ၁၀ အမ်ပီယာကျော် သုံးရမှာပါ။
နောက်တခါ အိမ်သုံးမီတာဘောက်စ်တွေ ကီလိုဝပ်အာဝါတွေ ကို လေ့လာကြည့်တော့လည်း အခိုက်အတန့်ဆိုလျှင် ၁၀ မှ ၁၅ အမ်ပီယာလောက်ထိပဲ သုံးစွဲသင့်ပြီး အချိန်ကြာကြာ တဆက်တည်းသုံးလျှင် ၅ အမ်ပီယာအထိအမြင့်ဆုံးထားသုံးစေဖို့ ရည်ရွယ်ကြောင်း ကြားဖူးတာပါ။
ဒီတော့ ကိုငယ်သုံးစွဲချင်တဲ့ပမာဏက အမြောက်အများထုတ်ယူလေ့ရှိသောနည်းစဉ်များသုံးစွဲထားသော နိုင်ငံတော်ပိုင်လုပ်ငန်းမှ မီတာရှိသော နေအိမ်တစ်လုံးကို ပေးလေ့ရှိတဲ့ဓါတ်အားသုံးစွဲနိုင်စွမ်းထက်တောင်ကျော်နေပါတယ်။
ဈေးကွက်မှာ အေ၇ာမြင်ဖူးတဲက ဆိုလာပြားတွေက ထောင့်မှန်စတုဂံပုံ ရှည်မျောမျောရယ်၊ စတုရန်းပုံ အပြားတွေရယ်ဖြစ်ပြီး ၁၅ ၀ပ် ၂၅၀ပ် ၇၅၀ပ် ၁၀၀ ၀ပ် စတာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ၅၀ ၀ပ်အပြားတောင် မရှိဘူးဆို ၂ပေ x ၂ပေ လောက်အရွယ်ရှိပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူနဲ့ နည်းပညာတွေကွာလို့ အရွယ်ကွာမယ်ဆိုလည်း အရမ်းကြီးမကွာလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။
ဒီတော့ အလင်းရောင် လိုအပ်ချက် ပြည့်မီအောင်ရရှိနေချိန်လေးမှာ ၀ပ်၂၀၀၀ (ဒီစီပါဝါနှင့်သာတွက်ပါသည်) အတိအကျထွက်နေဖို့ဆိုလျှင်တောင် လိုအပ်မည့် ဆိုလာပြား ဧရိယာက မနည်းလှပါဘူးနော်။ (အတိအကျကို ထုတ်လုပ်သူများထံမှ အတည်ပြုရန်လိုပါမယ်)
ကိုငယ်က အဲဒီလို ရတဲ့ ဒီစီလျှပ်စစ် ၂၀၀၀ ၀ပ်ကို အေစီ ၂၄၀ ဗို့အားစနစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသုံးစွဲလိုမယ်ထင်ပါတယ်။
အဲဒီအခါမျိုးမှာ ဒီစီ ၁၀၀ ဗို့ သို့မဟုတ် ၂၀၀ ဗို့ အနေအထားမှ အေစီ ၂၄၀ ပြောင်းတာမျိုးဆိုလျှင် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု Losses နဲနိုင်သော်လည်း ဒီစီ ၂၄ဗို့မှ အေစီ ၂၄၀ဗို့ ရလိုတာမျိုးဖြစ်လျှင် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု အတော်ကို များပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိသုံးစွဲလိုတဲ့ အေစီစနစ်မှာ ၂၀၀၀ ၀ပ်အထိသုံးချင်တယ်ဆိုလျှင် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို ကာမိအောင် ဆိုလာပြားပိုတပ်ဆင်ရမှာဖြစ်သလို ဗက်ထရီတွေလည်း အများကြီးဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခု ဆွေးနွေးတင်ပြတာက အလင်းရောင် စိတ်ကြိုက်ရနေချိန်မှာ ၂၀၀၀ ၀ပ်ထုတ်သုံးနိုင်ဖို့ပဲ ရှိသေးတာဆိုတော့ အလင်းရောင် လုံးဝသုံးမရတဲ့ ညဖက်အချိန်တွေ၊ အလင်းရောင် လျော့နည်းနေချိန်တွေမှာ သုံးနိုင်ဖို့ အားသွင်းသိုလှောင်ပေးရမည့်ကိစ္စအတွက် အထက်မှာပြောတဲ့ ဆိုလာပြားဆီက ရယူဖို့ ဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲနော်၊ သူ့ထက်ဧရိယာစုစုပေါင်းတစ်ဆကျော် ကြီးမားတဲ့အနေအထားလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီလိုအပ်ချက်လည်း ၂ဆအထိမဟုတ်ပေမယ့် တိုးဖို့လိုဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ရှိပါသေးတယ်။ အခုဆွေးနွေးတာမှာ မော်တာမောင်းတဲ့အနေမျိုး ရုတ်တရက် ရပ်နေရာက စတင်နှိုးရလို့ ၀န်ပိုဆွဲတာမျိုးကို ခံနိုင်အောင် ပိုပိုသာသာ တွက်ချက်ပေးထားတာမဟုတ်လို့ ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကျ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၂၀၀၀၀ပ် သုံးစွဲနေတာလို စိတ်တိုင်းကျ သွားသုံးချင်လို့မရသေးပါဘူးရှင်၊ အစစ အရာရာ ငဲ့ညှာဆင်ခြင် သုံးရမှာတွေရှိနေပါသေးတယ်။
ကုန်ကျမည့် ငွေကို မှန်းဆတင်ပြပေးနိုင်သူများ ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။
အေ၇ာက နေရောင်ခြည်ဆိုလာပြား မကောင်းဘူး မသုံးသင့်ဘူးလို့ပြောတာ ဟုတ်ဘူးနော်။
အားနည်းချက် အားသာချက် သဘာဝတွေကို မှန်းဆမိသလောက် ဆွေးနွေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်နဲ့ မဆိုင်ပေမဲ့ သတိရလို့ရေးလိုက်တာပါဗျာ။
ဒီစာကြောင်းလေးကိုဖတ်ရတော့ ကျနော် လွန်ခဲ့တဲ့ 10 နှစ်လောက်က မန္တလေး ဆင်ဖြူကန်ကွင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ စက်မှုလက်မှုပြပွဲမှာ တွေ့ကြုံခဲ့တာလေးကို ပြန်ပြောင်းသတိရမိတယ်။
ကျနော် GTI ကျောင်းသားဘ၀ပဲရှိပါသေးတယ်။ မြန်မာ့ ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက ဘိလပ်မြေတွေပေါ်ကာစပေါ့။ အဲဒီကုမ္ပဏီကလည်း လာပြီးတော့ ပြခန်းဖွင့်ပါတယ်။ ဘိလပ်မြေ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလုပ်တာပေါ့။
ကျနော်သွားကြည့်တော့ ဘာတွေ ဘယ်လိုကောင်းကြောင်း ရွှန်းရွှန်းဝေအောင် ရှင်းပြပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း ကျောင်းသားဆိုတော့ ကိုယ်သိချင်တာလေးမေးလိုက်မိပါတယ်။
" အကိုတို့ဘိလပ်မြေကိုသုံးပြီးတော့ ၁:၂:၄ အချိုးနဲ့ ဘိလပ်မြေ ဖျော်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကွန်ကရစ်ရဲ့ ခံနိုင်အား ဘယ်လောက်ရပါသလဲ" လို့မေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီကျမှပဲ အိ၊ အဲ၊ အင်း အဲဒါတော့ ဆိုတဲ့အသံတွေကြားရပါတော့တယ်။ ဘာစမ်းသပ်မှုမှ မရှိပဲ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကို အရင်လုပ်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် Sale promoter ကပဲ ဘိလပ်မြေအကြောင်းကို မသိပဲ ၀င်လုပ်နေတာလားတော့မသိပါဘူး။
ကျွန်တော်က Off-Grid သုံးဖို့အတွက် စဉ်းစားနေလို့ပါ။ ကျေးဇူးဗျာ ပြောပြပေးတာ။ US websites တစ်ချို့ကြည့်ကြည့်တာတော့ US$20000 ကျော်လောက်ကျတယ်ပြောတယ်။ ဘက်ထရီက ၆လတစ်ကြိမ် Maintenance လုပ်ရပြီးတော့ ၁၀နှစ်ခံတယ်ပြောပါတယ်။ 2000 watts စွန်စွန်းလေးပါပဲ သူနမူနာပြထားတဲ့အိမ်က။
အေရာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးတာလဲ အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုရင် ဆိုလာဟာ မသုံးဆွဲမီ solar knowledge ကို အရင်သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နယ်အရပ်ရပ်ကိုသွားပြီးငွေ ကုန်ကြေးကျ ခံကာ အရောင်းပြ ပွဲလေးတွေ Road Show လေးတွေကို အခွင့်သာရင် သာသလို တစ်လ တစ်ကြိမ်လောက် ပြဖို့ သွားခဲ့ ကြ ပါတယ်။ ဘာလို့ အဲလိုလုပ်ရသလဲဆို၇င် ဆိုလာစွမ်းအင် စနစ်ဟာ နေရောင်ခြည် မှ အလကား ရတယ် ဆိုပေမယ့် သူ နဲ့ ဆက်စပ်ပစည်းတွေက အတော်များများ ဟာ ဈေးကြီးတယ် လို့ ယူ ဆ လို့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ ကု မဏီ အနေ နဲ့ဆိုလာပစည်းတွေ ကိုမိတ်ဆက်တာ မှန်ပေမယ့် ရောင်းချ ရ ၇င်ပြီးရော စနစ်ကိုတော့ မသုံးပါဘူး ဆိုလာဟာတပ်ဆင်ပြီး၇င်တော့ အမှန်တကယ် အကျိုး ရှိမှန်းသိပါတယ်သို့ သော်ဘယ်လို အကျိုး ၇ှိတယ် ဆိုတာ ကို စကားအဖြစ်ပြော ပြ တာ ထက်စာရင် လက်တွေ့ ပြသ တာဟာ ဆိုလာအတွက် ရေ ၇ှည် မှာကုမဏီ ဘက်က ကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါ မှ မဟုတ် အသုံးပြု သူ End user ဘက်ကကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သိနိုင်အောင်လို့ တမင် ပြသရောင်းချ တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလာဟာ market ထဲမှာ တွေ့ နေကြ ဆိုလာဆဲလ်တွေ တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု တူညီ တယ် လို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ့် brand နဲ့ တော့အမြဲတမ်းကွာ ခြားပါတယ် ဘာလို့ ကွာခြား၇သလဲဆို၇င် Technology ပါပဲ ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲ Assembly လုပ်လုပ် Technology ကောင်းရင် အရည်အသွေးကောင်းကောင်းထွက်ပါတယ်၊ အဲဒီ လို အရေ အသွေး အပြည့် အဝ ၇ှိတဲ့ ဆိုလာပင်နယ် တွေကို သုံး မှ အမှန်တကယ် specification အတိုင်းအသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။းဒါက တော့ ဆိုလာ ဆဲလ် တွေ နဲ့ ပတ်သတ်လို့ သုုံးဆွဲသူ တွေ အနေနဲ့ သိသင့်တာလေးတွေ ကိုတင်ပြ တာပါ၊ နောက်တချက်က တော့ controller ပါ ဆိုလာဆဲလ် ကောင်းတိုင်းလည်း အသုံးတည့်မယ်လို့ အသေအချာ ပြောလို့်မ၇ ပါဘူး သူနဲ့ သုံး တဲ့ အခါ မှာ မရှိမဖြစ်လို အပ်တာက တော့ controller ပါ၊ controller မှာလဲ အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးပါပဲ MPPT,PWM ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံ က Ampere ကို control လုပ်တယ်ဆိုပေမယ့် တချို့ controller brand ကောင်းကောင်းတွေ က ဆိုလာပင်နယ် က ထွက်တဲ့ Ampere ကို ညနေပိုင်း နေရောင်ခြည် ကျ သွားချိန်မှာ မြင့်ပြီးတော့ battery ကို charge လုပ်ပါတယ်၊ နောက် တစ်ခု က batteryပါ သူကတော့ storage ပိုင်းဖြစ်တဲ့ အတွက် အမျိုးအစားကောင်းကောင်းသုံးခြင်းဖြင့် ရေ ၇ှည် ကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေပါတယ်။နောက်ပိုင်းပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှူ အပိုင်းအနေဲ့ဆိုလာစွမ်းအင်ကိုသုံးဆွဲ ရာမှာ ဘတ်ထရီက ပထမဆုံး အပ်ိုင်းမှာ ပါပါတယ်၊ ၄ နှစ်သက်တမ်းလောက်ရှိလာချိန်မှာ ဘတ်ထရီ ကိုပဲ ပထမဆုံးပြုပြင်လဲလှယ် ခြင်းကို ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ အဲစကားလုံးတွေ တောင်ရည်သွားတဲ့ အတွက် လိုရင်းကို မရောက်ဖူးဖြစ်နေပါတယ်၊ ကိုငယ်ပြောသလို ဝပ်၂၀၀၀ လောက်ကို ၂၄ နာရီ လောက်သုံးမည် ဆိုလျှင် ပထမဆုံး သိချင် တာက ဘယ်လိုမျိုးအမျိုးအစားတွေ အတွက် Load ကိုသုံးချင်တာလဲ အရင်သိချင်ပါတယ် ၊အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ်ပေး ချင် လို့ ပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် တို့ က servery လုပ်ပေးတယ် ဆို တာ customer ကိုသက်သာစေချင်လို့ပါ၊
သာမာန် အိမ်တစ်လုံး အသုံးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် စဉ်းစားနေတာက Power Grid ကနေမယူတော့ပဲ Off-Grid လုပ်မလို့ပါ။ နေရာက လမ်းမနဲ့ နည်းနည်းဝေးပြီး ရွာလိုမျိုး နေရာလေးမလို့ပါ။ စဉ်းစားရုံပဲရှိပါသေးတယ်။ Proposal Setup လေးတစ်ခုလောက် ချပြနိုင်ရင်တော့ Forum မှာဝင်ဖတ်တဲ့သူတွေလည်း ဗဟုသုတရအောင်ဆိုပြီး မေးကြည့်တာပါ။ Lighting အနေနဲ့ 400w လောက် Max: ပေါ့လေ။ အမြဲတော့ အကုန်ဖွင့်မထားဘူးပေါ့။ TV တစ်လုံး LCD 32" လောက်သုံးပြီး 90w ၀န်းကျင်ရှိမှာပေါ့။ တစ်ခြားသူနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်း အားလုံး 200w လောက်ပေါ့။ Laptop ကွန်ပျူတာ + printer စသည် 100w ရေခဲသေတ္တာ 400w Microwave Oven 1200w (အမြဲတော့မသုံးဘူးပေါ့) အ၀တ်လျှော်စက် 500w. Vacuum Cleaner 500w. Water Pump 150w စုစုပေါင်း 2340w လောက်ရှိပါတယ်။ Diesel Generator တစ်လုံးကတော့ supplementary အနေနဲ့ထားရမှာပေါ့ 10KVA တစ်လုံးလောက်။ နမူနာလေး စိတ်ကူးနဲ့ဆင်ပြပေးရင်တော့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ဘာလို့လဲဆိုရင် ဆိုလာဟာ မသုံးဆွဲမီ solar knowledge ကို အရင်သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ......
ဟုတ်ကဲ့ရှင် နေရောင်ခြည်မှလျှပ်စစ်ဓါတ်ထုတ်ယူအသုံးချစနစ်ကို သုံးစွဲဖို့ စိတ်ပါဝင်စား နေသူတွေအနက် ဗဟုသုတလိုအပ်သူများတာမှန်နိုင်ပေမယ့် အချို့မှာ အတန်အသင့် ဗဟုသုတရှိကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဆွေးနွေးရှင်းလင်းပေးတဲ့အနေအထား ၂မျိုးခွဲသင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။
ဗဟုသုတ အတန်အသင့်ရှိထားသူတွေအတွက် စနစ်တစ်ခုလုံးအတွက် ခြုံငုံဆွေးနွေးမည့်အစား သီးခြားအပိုင်းငယ်လေးတွေ ခွဲပြီး နည်းပညာရှုထောင့်မှ ရှင်းပြပေးတာက ပိုအကျိုးရှိစေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
အေ၇ာအနေနှင့် စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ အချက်အလက်အချို့ကို ဥပမာပေးရပါလျှင်
၁) ဆိုလာပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ယေဘုယျ အချက်အလက်ကိန်းဂဏန်း အချို့သိလိုပါတယ်။
(ထုတ်လုပ်သူ၊ ဖြန့်ချိသူ ကွာခြားလျှင် အရည်အသွေး ဈေးနှုန်း စတဲ့ ကွာခြားမှုမျိုးရှိတာကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ကြတာကြောင့် ဘယ်အမျိုးအစားက ပိုမို တွက်ခြေကိုက်တယ် စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူး အသေးစိတ်တွေကို မသိလိုပါဘူး။)
(က) ဈေးကွက်မှာအလွယ်ရနိုင်တဲ့ အရွယ်များ နှင့် ခန့်မှန်းတန်ဖိုး (ထိခိုက်ကွဲရှပျက်စီးလွယ်မှုရှိ/ မရှိ အမျိုးအစား ခွဲခြား၍ ခန့်မှန်းသိလိုပါသည်)
(ခ) ထုတ်ကုန်တစ်ခု (သို့မဟုတ်) တစ်ယူနစ်ဧရိယာမှ စွမ်းအားပြည့် ထုတ်ပေးနိုင်စဉ် ထုတ်လုပ်ပေးမည့် ဒီစီ လျှပ်စစ်ဗို့အား နှင့် လျှပ်စီး ပမာဏ
(မူလထုတ်လုပ်သူက ၀ပ် ဖြင့်သာ ဖေါ်ပြလျှင်လဲ သင့်တော်သူက စူးစမ်းတင်ပြပေးစေလိုပါသည်။)
(ဂ) အလင်းရောင်ရရှိမှု ကွာခြားလျှင် ဆက်စပ်လျော့နည့်လာမည့် ထုတ်လုပ်နိုင်မှုအခြေအနေ
(ဃ) အသုံးပြုသက်တမ်း ၅နှစ်ကြာပြီးလျှင် ၁၀နှစ်ကြာပြီးလျှင် စသည်ဖြင့် ဆက်စပ်ကျဆင်းလာမည့် ထုတ်လုပ်နိုင်မှုအခြေအနေ
၂။ ဒီစီ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်များ သိုလှောင် တဲ့အပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက် အချို့သိလိုပါတယ်။
(က) အသုံးပြုလေ့ရှိသော ဘက်ထရီအမျိုးအစားများ၊ သိုလှောင်/ထုတ်ယူနိုင်စွမ်း အရွယ်တို့နှင့်ခန့်မှန်း ဈေးနှုန်းများ
(ခ) ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းသုံးပါက အသုံးပြုနိုင်သော ခန့်မှန်းသက်တမ်း
၃။ လျှပ်စီး ထိန်းချုပ် ကန့်သတ်အားသွင်းပေးနိုင်သော အားသွင်းစက်(အစိတ်အပိုင်း)တို့နှင့် ပတ်သက်သောအချက်အလက်များ
(က) ပုံမှန်အားသွင်းဗို့အားနှင့် အမြင့်ဆုံးအားသွင်းလျှပ်စီး။ ယင်းအပိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ခန့်မှန်းတန်ဖိုး
၄။ အင်ဗာတာနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ တို့ကိုလဲ ယေဘုယျအားဖြင့် သိရှိလိုပါတယ်။
(က) ဘက်ထရီများစွမ်းအားပြည့်နေစဉ် ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်မည့် ဗို့အား၊လျှပ်စီး နှင့် ကြိမ်နှုန်း၊ အေစီအထွက်လှိုင်း၏ပုံ အကြောင်းတို့
(ခ) စွမ်းအားပြည့် ထုတ်ယူသုံးနေစဉ် ဒီစီအ၀င်ဖက်မှ ဆွဲယူနေမည့် လျှပ်စီးနှင့် အသုံးပြုဗို့အား
(ဂ) အေစီ ဆင်ဂယ်ဖေ့စ် ဆိုင်းဝေဖ့် အင်ဗာတာတို့အတွက် အထွက်စွမ်းရည်နှင့် ခန့်မှန်း ဈေးနှုန်းများ သိလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
(၃။ နှင့် ၄။ အတွက် ပူးပေါင်းတည်ဆောက်လျှင်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါက သီးခြားခွဲပြီး ခန့်မှန်းဖေါ်ပြတာမျိုးသိလိုပါတယ်)
ဒါက တော့ ဆိုလာ ဆဲလ် တွေ နဲ့ ပတ်သတ်လို့ သုုံးဆွဲသူ တွေ အနေနဲ့ သိသင့်တာလေးတွေ ကိုတင်ပြ တာပါ၊ နောက်တချက်က တော့ controller ပါ ဆိုလာဆဲလ် ကောင်းတိုင်းလည်း အသုံးတည့်မယ်လို့ အသေအချာ ပြောလို့်မ၇ ပါဘူး သူနဲ့ သုံး တဲ့ အခါ မှာ မရှိမဖြစ်လို အပ်တာက တော့ controller ပါ၊ controller မှာလဲ အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးပါပဲ MPPT, PWM ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံ က Ampere ကို control လုပ်တယ်ဆိုပေမယ့် တချို့ controller brand ကောင်းကောင်းတွေ က ဆိုလာပင်နယ် က ထွက်တဲ့ Ampere ကို ညနေပိုင်း နေရောင်ခြည် ကျ သွားချိန်မှာ မြင့်ပြီးတော့ battery ကို charge လုပ်ပါတယ်၊
ညနေပိုင်းနေရောင်ခြည်ကျသွားချိန်မှာ ကန့်သတ်လျှပ်စီးသတ်မှတ်ချက်ကို မြှင့်တာလား ဘာကြောင့်မြှင့်လိုတာလဲဆိုတဲ့အချက်ကို မရှင်းပါဘူးရှင်။
အထက်မှာ ကိုငယ်တင်ပြခဲ့တဲ့ အတိုင်း ကိုယ်ပိုင် အရန်မီးစက်မှတပါး ဓါတ်အားဝယ်ယူသုံးစွဲထောက်ပံ့နိုင်မှု မရှိတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုမယ်ဆိုလျှင် ၀န်အပြည့် တညလုံး အသုံးခံနိုင်ဖို့ ဘက်ထရီများအားလုံးဟာ ညနေပိုင်းမှာ ၁၀၀% အားအပြည့်ရှိနေရမှာပါ။ အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ မွန်းလွဲချိန်မှာထဲက ရာနှုန်းအချို့ပြည့်ဝနေသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ညနေပိုင်းနေရောင်ကျတော့ ရနိုင်သလောက် နည်းနည်းဖြည့်သွားရင်း အားသွင်းလျှပ်စီးဟာ လျော့နည်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စီးမြင့်ယူနိုင်ရအောင် စွမ်းအင်ပင်ရင်း ကို၌က ကျနေပြီဆိုတော့ တကယ်တမ်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလျှင်တော့ ရရှိလာတဲ့ ဒီစီအားကို မူလက အပြိုင်ဆက်သွယ်ရယူထားတာတွေရှိခဲ့မှသာ တန်းဆက်အနေသို့ပြောင်းလဲစေပြီး အလင်းရောင် နည်းလာလို့ ပုံမှန်အတိုင်းသာဆို အားသွင်းနိုင်စွမ်းမရှိတော့တာတွေ စုပေါင်းစေကာ ခြစ်ချုတ်ရယူ ဆက်လက် အားသွင်းပေးနေနိုင်အောင် စီမံတာမျိုးပဲ ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။
နောက် တစ်ခု က batteryပါ သူကတော့ storage ပိုင်းဖြစ်တဲ့ အတွက် အမျိုးအစားကောင်းကောင်းသုံးခြင်းဖြင့် ရေ ၇ှည် ကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေပါတယ်။
၄ နှစ်သက်တမ်းလောက်ရှိလာချိန်မှာ ဘတ်ထရီ ကိုပဲ ပထမဆုံးပြုပြင်လဲလှယ် ခြင်းကို ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊
ဘက်ထရီ အမျိုးအစားကောင်းတာသုံးလို့ မကြာခဏ လဲလှယ်ရန်မလိုပါက ရေရှည်မှာ တွက်သားကိုက်နိုင်တာမှန်းဆမိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘက်ထရီရဲ့သက်တမ်းဟာ အသုံးပြုသူရဲ့ နည်းစနစ်မှန်ကန်သလား မှားယွင်းသလား ဆိုတဲ့အပေါ် အများကြီးမူတည် တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် အားသွင်းအားထုတ်ပြုလုပ်ပေးမည့် ကွန်ထရိုလာတို့ရဲ့ နည်းပညာထက် စံညွှန်း သတ်မှတ်ချက် ကိန်းဂဏန်းတွေကိုလည်း စိတ်ဝင်စားမိတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲစကားလုံးတွေ တောင်ရည်သွားတဲ့ အတွက် လိုရင်းကို မရောက်ဖူးဖြစ်နေပါတယ်၊ ကိုငယ်ပြောသလို ဝပ်၂၀၀၀ လောက်ကို ၂၄ နာရီ လောက်သုံးမည် ဆိုလျှင် ပထမဆုံး သိချင် တာက ဘယ်လိုမျိုးအမျိုးအစားတွေ အတွက် Load ကိုသုံးချင်တာလဲ အရင်သိချင်ပါတယ် ၊အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ်ပေး ချင် လို့ ပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် တို့ က servery လုပ်ပေးတယ် ဆို တာ customer ကိုသက်သာစေချင်လို့ပါ၊
စေတနာနဲ့ရှင်းလင်းပြတဲ့ စကားတွေဖြစ်တာမို့ရှည်ရှည်တိုတို အကျိုးရှိပါတယ်ရှင်၊ အေ၇ာတို့ သေချာ ဖတ်ကြပါတယ်။
ကိုငယ်က နမူနာခန့်မှန်းတွက်ပြစေလိုတာမှာတော့ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် မီးဖိုလို ၀ပ်များတာကို ရံဖန်ရံခါ သုံးမည့်သဘောနဲ့ မော်တာပါတာဆိုလို့ ရေခဲသေတ္တာလိုမျိုး ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
အေ၇ာအနေနှင့်လည်း နမူနာပေးကြည့်ချင်တာက ဘယ်လို Load လို့ အထူးတလည်မစဉ်းစားနေပဲ တည်ငြိမ်စွာဖြင့် ၂၄ နာရီ အဆက်မပြတ် ၂၀၀၀ ၀ပ် ဆွဲယူနေမည့် အပူပေး ကရိယာ တစ်လုံးသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက်
၁) အသုံးပြုပေးရမည် ဆိုလာပြားတို့၏ ၀ပ် စုစုပေါင်း တန်ဖိုး နှင့် ဧရိယာ။ သက်တမ်း ၂၀နှစ်သုံးနိုင်ရန် ကုန်ကျမည့် ခန့်မှန်းတန်ဖိုး
၂) လိုအပ်မည့် ဘက်ထရီ အရေအတွက်နှင့် အမ်ပီယာအာဝါ ဖေါ်ညွှန်းချက်။ သက်တမ်း၎နှစ် သုံးနိုင်ရန်အတွက် ကုန်ကျမည့်ခန့်မှန်းတန်ဘိုး
၃) ကွန်ထရိုလာ၏ အ၀င်/အထွက် စနစ် ဗို့အားများနှင့် အချက်အလက်မျာ။ သက်တမ်း ၂၀နှစ် အထက် သုံးနိုင်ရန် ကုန်ကျမည့်ခန့်မှန်းတန်ဘိုးတို့ကို သိရှိလိုပါတယ်။
စုစုပေါင်း 2340w လောက်ရှိပါတယ်။ Diesel Generator တစ်လုံးကတော့ supplementary အနေနဲ့ထားရမှာပေါ့ 10KVA တစ်လုံးလောက်။ နမူနာလေး စိတ်ကူးနဲ့ဆင်ပြပေးရင်တော့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
၁၀ကေဗီအေ ဆိုတာ စာရိုက်မှားတာများလားရှင်။
ကမ္ဘာကြီး စိမ်းလမ်း ကျမ်းမာအောင် ဆိုပြီး နေရောင်ခြည်မှထုတ်ရတဲ့လျှပ်စစ်ကို သုံးချင်သူတွေရှိကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် ချွေတာသုံးဖို့ စိတ်ကူးမရှိလျှင်တော့ ဘက်ထရီတွေထုတ်လုပ်ရတာကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနေဦးမှာပါ။ သုံးနေကျလောက်ကို သုံးချင်ကြတာအတွက် အပြစ်တော့ မဆိုချင်ပါဘူးရှင် စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်ကို မျှဝေပြောကြည့်မိတာပါ။
ဆက်လက်ပြီး ခံစားချက်အချို့ ပြောရမယ်ဆိုလျှင်
မြန်မာပြည်မှာ နေရောင်ခြည်မှလျှပ်စစ်ဓါတ်ထုတ်ယူအသုံးချမှုနဲသေးတာနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ အရောင်းရနဲတာအပေါ် မတည်ငွေရင်းရတာ များနေလို့ကြောင့်သာလို့ ကောက်ချက်ချကြတာများပါတယ်။
အမှန်မှာတော့ အဲဒါ ပြည့်စုံတဲ့ သုံးသပ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။
ဆိုလာစနစ်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူတွေ ကိုယ်တိုင်က အသုံးမြင့်လာစေမယ့်အချက်တွေကို ကောင်းစွာမရှာဖွေနိုင်ဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
လက်လှမ်းမီသလောက် လေ့လာကြည့်တော့ ဆိုလာပြားက လိုအပ်တဲ့အလင်းရောင်လုံလောက်စွာရနေချိန်မှာ ထုတ်ပေးမည့် ၀ပ်တန်ဖိုးနဲ့ အေစီ လျှပ်စစ်အသုံးပြုပစ္စည်းတွေက ဆွဲယူမည့်ဝပ်တန်ဖိုး အတူတူမဟုတ်ဘူး အပြည့်ပြန်မရပဲ ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ် ဆိုတာလောက်တောင် ရှင်းမပြနိုင်ကြဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။
လျှပ်စစ်မီးခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာ ညဖက် အလင်းရောင် ပေးနိုင်ဖို့ ကိစ္စမျိုးအတွက် ဆိုလာပြား အသေးစားလေးတွေစမ်းသပ်သုံးနိုင်အောင် ဆိုလာပြားရဲ့ ဒီစီလျှပ်စစ် ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း မမျှဝေတတ်ကြဘူး။
အေ၇ာ သဘောက သက်သာချောင်ချိစွာ ရနိုင်သလောက် စမ်းထုတ်ကြည့်ပြီး LED မီးလုံးလေးထွန်းတာမျိုးဖြစ်ဖြစ် အသုံးချနိုင်သူတွေ များလာအောင် ကူညီပေးဖို့ စဉ်းစားကြတာမျိုးဖြစ်စေချင်တာပါ။ စီးပွါးဖြစ် ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေ ပြောနေရင်း ဒီလိုအပ်ချက်တွေကို ကူညီနိုင်သူတိုးပွါးစေဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အခုနေတော့ ကမ္ဘာ့အတိုင်းအတာနဲ့ ဆိုလာပြားထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာသလို ဈေးနှုန်းတွေလဲ ကျဆင်းလာပြီလို့ထင်ပါတယ်၊ မြန်မာပြည်အတွက် လက်ရှိလျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုရဲ့ ရာနှုန်း ဘယ်လောက်ရှိလျှင်၊ (စုစုပေါင်းသုံးစွဲလိုအား မည်မျှရှိလျှင်) စသည်ဖြင့် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပြီး စက်ရုံတည်ထောင်ဖို့သင့်မသင့် ချိန်ဆကြတယ်လို့အေ၇ာကြားဖူးတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ စွမ်းရည်ကောင်းတဲ့ ဆိုလာပြားတွေ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး လက်ရှိပေါက်ဈေးထက် သက်သာအောင်ရောင်းနိုင်မှာမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် ပြည်ပကပဲ အမြောက်အများတင်သွင်းနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာလာမှာမျိုး စတာတွေကို ယခု ဆိုလာစနစ်နဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကလူတွေအားလုံးက ၀မ်းပမ်းတသာ ကြိုဆိုလိုလားကြမှာလား သိချင်မိတယ်။
ဟိ။ ဟုတ်ပေသား ပုဒ်မ ချပြီးခြားထားတာမမြင်ပဲ အေ၇ာစာဖတ်တာ လွဲသွားတယ်။
လွဲမှာပေါ့ ....." ပေါ့ "ဆိုတာကြီးနဲ့ဝါကျဆုံးထားပြီးမှ 10KVA တစ်လုံးလောက် လို့စကားစုလေးပဲ ပြန်ရေးတာဆိုတော့ နောက်ကစာတွေနဲ့ တစ်ဆက်ထဲဖတ်ချလိုက်တာလေ။
ရေးတာက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပုဒ်မ ပါလျက်နဲ့ မှားဖတ်တာကတော့ အေ၇ာမှားတာပါ။